Ho mafy ny an’ny “mafiady” | NewsMada
Ho mafy ny an’ny “mafiady”
Tsy misy maniry ny ratsy ! Nosantarin’ny loza voajanahary ity taona 2018 ity, ho antsika eto Madagasikara. Nitondra fahasimbana maro, miantraika any amin’ny fiainana ankapobeny, indrindra ny toekarena sy ny sosialy. Na izany aza, tsy maintsy atrehina ny antambo, tsy maintsy arenina ny simba ary tsy maintsy manana fanantenana sy finoana fa hiarina atsy ho atsy.
Tsy lavitra an’izany ny lafin-javatra hafa. Mihazakazaka ny toe-draharaha, mifamahofaho ny rivotra politika amin’izao fiandohan’ny taona izao. Taom-pifidianana rahateo ity 2018 ity, ka tsy atao mahagaga raha hanomboka ny “tena ady”. Sanatria tsy ady ratsy, fa ady ho an’ny hitantana ny firenena hifanandrinan’ny mpanao politika. Miezaka manatsara ny endriny, mitanisa ny zava-bita ny mpitondra, sady mitsikera ireo ho mpifanandrina aminy ihany, andaniny. Miezaka mitanisa ny olana, ny zavatra tsy vitan’ny mpitondra, milaza fa manana ny vahaolana kosa ny mpanohitra, ankilany. Misy koa ny marivo salosana, tsy tena manan- kevitra, na koa manaran-driandrano, matin’ny tombontsoa kely, patsa indray mahandro, nefa hividy lafo ny ataony, rahampitso.
Ny iraisan’ny mpitondra sy ny mpifaninana aminy, samy milaza fa tia tanindrazana, tsy manana fahavalo ary hany tanjona ny “ady amin’ny fahantrana”. Kabary ambony vavahady izany, fa rehefa tena zohina, “tena adin’izy ireo ny mitranga, tsy mifampitsitsy, tsy ananan-kavana” (??) satria “ady seza” ny resaka. Rehefa azo ny seza, maro ny voambolana azo ampiasaina, toy ny hoe “efa mandeha ny asa tena fampandrosoana”, “aoka haari-pery isika satria tsapanay ny fahorianareo”, “tsy ho ela ny vokatra”.
Ny manaitra, lazaina fa tonga foana ny krizy rehefa manomboka miarina ny toekarena. Azo antoka fa tsy vitsy ireo nahatsiaro ny takaitra navelan’ny krizy 2009, noheverina fa hitondra fiovana. Tena niova tokoa, satria maherin’ny 2.000 Ar ny kilaon’ny vary, manodidina ny 4.000 Ar ny litatry ny lasantsy sy ny sandan’ny 1 euro! Dia inona indray ny “adintsika” fa toa vao mainka mitombo ny “mafiady”? Na izany aza, tsy maintsy misy ny fanantenana araka ny tarigetran’ny mpino kristianina hoe “matokia ry mpiray fanantenana”.